काजी र बाबुसाहेबको चुरिफुरी धेरै दिन छैन
यतिबेला हामी वाम गठवन्धनलाई जिताउने महान् अभियानमा हामी एकजुट भएका छौं । जस्तोसुकै आँधिवेरी र विपत्तिलाई खपेर भएपनि हामी गठवन्धनका उमेदवारहरुलाई शानदार ढंगले विजयी बनाउने छौं । हामी अलि अगाडीसम्म, म सुवास कर्माचार्य भोट माग्दै जनताका घरमा पुग्थें । मलाई भोट हाल्ने तमाम जनसमुदायलाई अलिक अप्ठ्यारो पनि लाग्दो हो, अलि असजिलो महसुस पनि हुँदो हो । मैले धेरै पटक भनें, सुर्य चिन्हमा छाप लगाएर एमालेका उमेदवारलाई विजयी गराउन आग्रह र अनुरोध पनि गरें पटक पटक ।
तर आज म सुर्य चिन्हमा मात्र छाप लगाउन अनुरोध गरिरहेको छैन । आज म एमालेका लागि मात्र भोट मागिरहेको छैन । हिजो पटक पटक अग्नि सापकोटासँग चुनाव लडेको म आज उनै अग्नि सापकोटालाई भोट मागिरहेको छु । मतलव यो की यतिबेला परिस्थिती बदलीएको छ, र हामी बदलिएका छौं । आज गोलाकारभित्रको हंसियाहथौडा हाम्रै चिन्ह हो, अग्नि सापकोटा हाम्रै उमेदवार हुनुहुन्छ । सुर्य चिन्ह र हंसिया हथौडा एउटै ठान्नुस् र भोट हाल्नुस् ।
अब एउटै बाटो
नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि हिजोका दिनमा दुई फरक फरक बाटो तय गरेका हामीहरु अव एउटै बाटो हुँदै मुलुकको विकास, सम्बृद्धि र आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनका निम्ति लाग्ने अठोट र संकल्पका साथ यो प्रतिनीधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मैदानमा छौं । अब यो देश कम्युनिष्टहरुको हुनेछ, अब कम्युनिष्टहरुलाई छेक्न कसैले सक्ने छैन । हामी त्यो अभियानमा लागिरहेका छौं । हो कार्यकर्तामा खुल्दुली पक्कै पनि छ ।
हिजो सुर्य चिन्हमा भोट माग्दै आउने सुवास कर्माचार्य आज गोलाकार भित्रको हंसियाहथौडामा भोट माग्दै किन हिंडिरहेको छ ? हंसियाहथौडामा भोट माग्दै आउने अग्नि सापकोटा आज किन सुर्यमा भोट मागिरहनुभएको छ ? यो साझा उदेस्य किन बन्यो ? हामीले देख्यौं, चुनावी अभ्यास गरेको दशकौं बित्यो । हामी आज एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं, कम्युनिष्टहरु फुटेर हैन जुटेर मात्र नयाँ नेपाल निर्माण सम्भव छ ।
हामी सासंद भयौ तर चाहेको परिर्वतन भएन
हामीले देख्यौं अग्नि कमरेड पटक पटक सांसद बन्नुभयो, एमालेका अरु धेरै नेताहरु सांसद बन्नुभयो । तर हामीले चाहेको जस्तो नयाँ नेपाल बनाउन सकेनौं । हामीले चाहेजस्तो सम्वृद्ध नेपाल बनाउन सकेनौं । नेपाली जनताको सपना साकार बनाउन हामीले सकेनौं । त्यसैले हामीले निष्कर्ष निकाल्यौं, यहि गोलचक्करभित्र पाँचवर्षमा एक पटक भोट हाल्ने जितेर जाने केहि गर्न नसक्ने अनि फेरी पाँच वर्षपछि भोट माग्न आउने ।
यहि गोलचक्करभित्र फसिरहने हो भने हामीले चाहेको नयाँ नेपाल कसरी निर्माण हुन सक्दछ ? हामीले चाहेको यो गरीव जनताका जीवनमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ? हामीले भन्यौं साँचो अर्थमा यो देशलाई परिवर्तन गर्ने, क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने हो भने कम्युनिष्टहरु एकैठाउँमा आउनै पर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ आज हामी एक भएका छौं ।
अब एउटै पार्टी
अब माओवादी या एमाले पार्टी होइन । हामी त्यो दिशातर्फ गइरहेका छौं । अब अन्यौलता हटाइदिनुस्, हामी दुई पार्टी होइन एउटै पार्टी हौं । हाम्रा निश्चित लक्ष्य र उदेश्य छन् । हाम्रा साझा लक्ष्य र उदेश्य पुरा गर्न हिजो हामी फरक फरक बाटा हिंड्यौ होला, त्यो फरक कुरा हो । हाम्रा झण्डा त हिजोपनि त्यही हँसियाहथौडा त थियो नी । हामी कम्युनिष्टका एउटै झण्डा बोकेका होइनौ ? हाम्रा सिद्धान्त र दर्शनहरु एउटै थिएनन् र ? तर विविध कारणले हामी हिंड्ने बाटो फरक भए । र आज एउटै बाटो तय गर्ने निश्कर्ष निकालेको हो ।
विकासको बाधक कांग्रेस नै
हामी सुनिरहेका छौं, चुनावको संघारमा नेपाली कांग्रेसले पनि विकासका ठुला ठुला कुरा गरिरहेको छ । हुँदाहुँदा पशुपति शमसेरले पनि विकासका कुरा गरिरहेका छन् । परिवर्तनका पक्षधर, जनताको न्यायका पक्षधर र जनताका अधिकारका निम्ति लड्ने भनेको कम्युनिष्टहरु नै हुन् । हामिले देख्यौं नि, कांग्रेसले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यो देशमा बहुमतको सरकार कसैले चलाएको छ भने कांग्रेसले मात्रै चलाएको छ । गिरीजाप्रसाद अत्याधिक बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको होइन ? देउवाले पटक पटक बहुमतको सरकार चलाए ।
तर मुलुकको विकास, सम्वृद्धि र आमुल परिवर्तनको पक्षमा उनीहरुले कहिल्यै मुद्धा उठाएनन् । अहिले सुनिँदैछ की कांग्रेसले पनि चुनाव जित्यो भने बृद्धभत्ता पाँच हजार पु¥याउँछ रे । मनमोहन अधिकारीले एक सय बृद्ध भत्ताको थालनी गर्दा अविस्वास प्रस्ताव लैजाने त्यही कांग्रेस होइन ? जनतालाई कनिका छरेजस्तो बुढाबुढीलाई भत्ता दिन पाइँदैन, एमालेले गलत ग¥यो भनेर अविस्वास प्रस्ताव लाने यिनै कांग्रेस हुन् । अस्ति भखैरै मात्र पनि माओवादीसहितको सरकारमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गर्नुपर्छ भनेर दुई हजार पु¥याए । तर त्यही कांग्रेसले बुढाबुढीलाई दुई हजार भत्ता दिएर देशको ढुकुटी सिद्धिन्छ भनेर उफ्रीपाफ्री गरेको होइन । पटक पटक मुलुकको अर्थमन्त्री भएको रामशरण महतले संसदमा बोलेको हामी सवैले सुनेकै छौं । हो उनीहरु बृद्धबृद्धा र असाहयका पक्षमा कहिल्यै थिएनन् न भोली हुनेछन् ।
हामीले गाउँमा विकास लग्यौ, काँग्रेसले विरोध ग¥यो
गाउँ गाउँमा हामीले विकासका कुरा ग¥यौं । आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ भनेर हामीले सुरु गरेको अभियानले आज लाखौं लाख रुपियाँ विकास बजेट गाउँमा ल्याइरहेको छ । कांग्रेसले यसको पनि विरोध ग¥यो त्यतिबेला । कांग्रेस जनद्रोही पार्टी हो, कांग्रेस गरीवको विरोधी पार्टी हो । उसले जनताको पक्षमा, न्याय र समानताका पक्षमा अनि विकास र सम्बृद्धिका पक्षमा कहिल्यै बोलेका छैन र बोल्दैन । कांग्रेसले विकासका ठुला ठुला कुरा गरेर जनतालाई अझै भ्रममा पार्ने दुस्साहस नगरोस् ।
काजी र बाबुसाहेबको चुरीफुरी अब धेरै दिन छैन
यो चुनावी अभियानमा हाम्रा काजीसाहेव र बाबुसाहेबहरुको चुरीफुरी बढिरहेको छ रे । अनेक खालका आतंक सिर्जना गरेर जनताको परिवर्तनको लहरलाई रोक्ने हर्कत सुरु गरेका छन रे । मैले गाउँ गाउँमा पुग्दा धेरै पटक सुनेको छु । मोहन बस्नेतले कम्युनिष्टका टाङ च्यातिदिने रे । तिघ्राका कुरा गर्ने रे, ह्याकुलाका कुरा गर्ने रे । म भन्न चाहन्छु यदि जनताको परिवर्तनको बाटो छेक्नका लागि मोहन बस्नेत तिमीले तिघ्राका कुरा गर्छौ भने तिम्रा तिघ्रा तिन टुक्रा पार्नसक्ने तागत कम्युनिष्टहरुसँग छ हेक्का राख ।
जनतालाई भेडाच्याग्रा जस्तौ किन्न नखोज
हामी यो अभियानमा लागिरहँदा कसैले अवरोध गर्छ भने, ह्याकुलाका फुर्ति लगाउँछ भने परिवर्तनकामी तमाम युवाहरु त्यसविरुद्ध लड्न तयार छन् । अहिले यतातिर पैसाका कुरा पनि खुवै चलिरहेको छ । पैसाले दशैंमा भेडाच्यांग्रा किन्न सकिएला तर मान्छे भनेको मान्छ हो भेडाच्यांग्रा हैन । पैसाको तुजुक देखाएर जनतालाई भेडाबाख्रा झैं नसम्झ तिम्रा पैसामा कोही खरीद हुनेवाला छैन । जनता अज्ञानी छन्, उनीहरु गरीव छन् भनेर पैसाले किन्न खोज्ने ? कसैले यहाँ जनतालाई भेडावाख्रा जस्तो सम्झेर किन्ने प्रयास गर्छ भने तपाइँहरु गाउँ गाउँमा जुट्नुस्, बस्ति बस्तिमा जुट्नुस् ।
व्यापारी मित्रहरु,पैसा खेरा नफाल्नुहोस राजनीतिमा नाफा हुदैन
हामीले देखिरहेका छौं केहि व्यापारी साथीहरु चुनावी मैदानमा देखिएका छन् । हाम्रो राजेन्द्र भन्ने भाई हाम्रा नेता शरेस नेपालसँग चुनाव लड्दैछ । उद्योग वाणिज्य महाँसंघको केन्द्रिय सदस्य पनि हो क्यारे । उता विष्णु खत्री पनि चुनाव लड्दैछन् । अलिअलि पैसा छ क्यारे । पैसा कमाउनु, हुनु राम्रै कुरा हो । तर राजेन्द्र भाई र विष्णु भाईलाई म भन्न चाहन्छु, तपाइँहरुसँग पैसा छ ठिक छ तर भाइहरु यो राजनीति तपाइहरुको बसको कुरा होइन है । यहाँ त जनताको सेवा गर्नुपर्छ । जनताको चाकड गर्नुपर्दछ । जनताका दुःख सुःखमा गाउँबस्तिमा हिंड्ने हिम्मत चाहिन्छ । टिकट धरी किनेर, दुइचार करोड खर्च गरेर सांसद हुने सपना देख्ने ? पैसा छ भने एउटा राम्रो उद्योग खोल्नुस्, हाम्रा युवाहरुलाई रोजगारी दिनुस्, लगानी गरेर आम्दानी गर्नुस् । तपइँहरुका लागि त्यही बाटो राम्रो छ ।
टिकट पाउँन लगानी गर्नेले चुनाव पछि लगानी असुल्न खोज्छ
न्यायका पक्षधर आजका सचेत जनताले बुझेकै छन् की कसैले एक लाख लगानी गरेर पसल थाप्छ भने त्यो नाफा कमाउनका लागि नै हो । टिकट पाउनै राजेन्द्रजी र विष्णुजीले ठूलै लगानी गर्नुभएको छ । अझै करोडौं खर्च गरेर जनमत किन्ने हर्कत गर्दैहुनुहुन्छ । तपाइँहरु त ब्यापारी, के त्यो लगानी घाटा खानका लागि हो ? निश्चय पनि होइन । तपाइँहरु पाँच करोड खर्च गरेर चुनाव लड्ने भनेको जनताका आँखामा छारो हालेर दश करोड कमाउनका लागि हो । साँचो कुरा यहि नै हो । पाङताङका मान्छे खाली खुट्टा हिँडिरहेका छन्, गुम्बा गोल्चेका जनता भोकभोकै बस्या छन् हगामका बालबालिकाले स्कुल जान पाएका छैनन्, लेकका जनता उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ भनेर तपाइँहरु चुनाव लड्नुभएको भनेर कसैले पत्याउँनेवाला छैन । तपाइँहरु त ती जनतामाथि शोषण गर्नका लागि चुनाव लडेको हो, राज्यश्रोतको दोहन गर्न चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ । जनताले बुझेको यहि हो । जीवनभर राजनीति गरेको, जनताको मुक्तिका खातिर वर्षौं जेल परेको, परिवर्तन र क्रान्तिका लागि अनेकन कष्ट व्यहोरेको कम्युनिष्ट कार्यकर्तासँग चुनाव लड्ने ? कहाँको शरेस नेपाल कहाँको विचरा राजेन्द्र भाई, तुलना हुन सक्छ ? कहाँको अग्नि सापकोटा कहाँको मोहन बस्नेत, कसरी तुलना हुन्छ ?
मोहन बस्नेतले हाक्का हाक्की कमिशन मागे
जिल्लाका जलविद्युत आयोजना र अन्य योजनाहरुसँग हाकाहाकी कमिसन माग्ने मान्छे हुन मोहन बस्नेत । उनलाई जनताको दुःख के हो, मुलुकको विकास र सम्बृद्धि के हो थाहै छैन । उनलाई त पैसा चाहिएको छ, राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएको छ । अग्नि सापकोटा उनीजस्तो धम्क्याएर, हप्ता असुली गरेर खाने मान्छे त होइनन् नी ।
काँग्रेसको चुरीफुरी आँधी आउनुअघिको सन्नाटा
कांग्रेस निकै तडकभडक गरिरहेको छ । यो सन्नाटा आँधी आउनु अगाडीको सन्नाटा हो । अब हामी गाउँ गाउँ टोल टोलमा पुगेर यो गठवन्धनको पक्षमा एउटा आँधी सिर्जना गर्दैछौं । जनता विरोधि शक्तिलाई ठाउँको ठाउँमा रोकिदिन्छौं । अब कुनै पनि हिसावले समाज परिवर्तन र प्रगतीका पथमा अवरोध हुन्छ भने युवा साथीहरु प्रतिवाद गर्नुस् त्यस्को जिम्मा हामी लिनेछौं । उनीहरु तिघ्रा च्यात्छौं भनेर हिँड्न हुने हामी चुप लागेर बस्नुपर्ने ? उनीहरु आतंक फैलाउँदै हिँड्ने हामी चैं राम राम भनेर बस्ने ? युवा साथीहरु प्रतिवादका लागि तयार रहनुस् ।
(लेखक सिन्धुपाल्चोक एमालेका नेता हुन् । र, यो उनको निजि विचार हो ।)